मार्केटपाथ - सरलीकृत सामग्री प्रबंधन | Martech Zone
मार्केटपाथ - सरलीकृत सामग्री प्रबंधन
शनिबार, अक्टोबर 24, 2009 बिहीबार, डिसेम्बर 5, 2013 Douglas Karr
केहि महिना अगाडि म टोलीको भ्रमण गरें मार्केटपथ र उनीहरूको सफ्टवेयरको सेवा सेवा (सास) सामग्री प्रबन्धन प्रणाली (सीएमएस) को रूपमा प्रदर्शन प्राप्त भयो - जसमा दुबै ईकामर्स र आधारभूत ब्लगिging समाधान समावेश छन्। मैले कम्पनीको बारेमा धेरै सुनेको थिए तर अन्तत: डेमो प्राप्त गर्न र उनीहरूले के प्राप्त गरे भनेर हेर्न पाउँदा ठूलो थियो।
म्याट जेन्ट्ज मार्केटपाथका सह-संस्थापक हुन् र एक्स्ट्याक्टरेटमा काम गरे पहिलो दिनमा। उहाँ यस तथ्यलाई लुकाउँनुहुन्न कि उनीहरूको साधारण ईन्टरफेस उहाँकै समयबाट प्रभावित थियो सटीक लक्ष्य। यो एक राम्रो चाल हो। प्राय: सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीलाई वास्तवमा एक ठाँउ जानको लागि सीधा घुमाउरो आवश्यकता पर्छ। मार्केटपाथले उनीहरूलाई धेरै सरल र प्रयोग गर्न सजिलो राख्यो। यदि तपाइँ विन्डोज वा म्याकमा प्रोग्राम कसरी खोल्ने भनेर जान्नुहुन्छ भने, तपाईं मार्केटपाथ प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
मार्केटपथ CMS प्रशासनको स्क्रीनशट
मार्केटपथ CMS सम्पादकको स्क्रीनशट
मार्केटपथ CMS सुरक्षाको स्क्रीनशट
मार्केटपथ CMS गुगल एनालिटिक्सको स्क्रीनशट
तपाईं स्क्रीनशटहरू द्वारा देख्न सक्नुहुनेछ, यो प्रयोग गर्नको लागि अविश्वसनीय सरल अनुप्रयोग हो - तर तपाईं यसको साथ धेरै जटिल वेबसाइटहरू र अनलाइन स्टोरहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। ह्यारी पॉटर वाल आर्ट मार्केटपाथको भर्खरको ग्राहक हो जुन तपाईंको विषयवस्तु कसरी गहन बनाउन सकिन्छ साथसाथै साइट र ईकामर्स समाधानहरू कसरी सिमलेस छन् भन्ने कुराको झलक प्रदान गर्दछ।
मार्केटपथमा हुँदा, Highbridge खोजीको लागि साइटको अनुकूलनमा केही प्रतिक्रिया प्रदान गरियो। मलाई हाम्रा क्षेत्रीय कम्पनीहरूलाई मद्दत गर्न मन पराउँछु र मार्केटपाथ समाधानमा धेरै आश्वसनहरू छन्!
मार्केटपाथसँग एक ठूलो टोली र एक उत्तम समाधान छ। यदि तपाईं तिनीहरूलाई कल गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूको समाधानको बारेमा तपाईंले पढ्नुभयो Martech Zone!
टैग: CMSसामग्री व्यवस्थापनसामग्री व्यवस्थापन प्रणालीईकॉमर्स प्लेटफार्मबजार बाटोसाससास सेमी
बिंग + ट्विटर = वास्तविक समय खोजी
ईमेल संचार कहाँ हेड गरिएको छ?